Dhibaatooyin | Suomen Mielenterveysseura
”Dhibaatadu ma aha jiro, taasoo laga bogsoodo, ee waa mid nolosha la xiriirta."
Outi Ruishalme iyo Liisa Saaristo: Xanuunka nolosha iyo ka badbaadidda masiibada
Masiibo ama dhibaato waxaa loo yaqaan xaalad nolol adag, taasoo waaya-aragnimada laga dhaxlo ama sida looga gud-bayo aysan ku fileyn xalintooda, ama in la helo xal shaqeynaya. Waa xaalad cusub oo maaraynteedu adag tahay, sida geeri naxdin leh ama isbadel xaalad nololeed oo soo siyaada. Qofka dhibaatadu qabsato wuxuu dareemaa dhdhan la’aan iyo dac-darro, amaanka aasaasiga oo liita iyo noloshii oo faraha ka baxeysa.
Qofka dhibaatadu hayso wuxuu yeeshaa calaamado ama dareenno badan oo kal duwan, sida walaac, niyadjab, hurdo la’aan, caro badan iyo jir xanuun. Dadku awoodda ay u yeelan karaan xaaladahaas adag ee nolosha aad bay u kale duwan tahay. Dad waxay dareemaan dhibka muddo kooban oo markiiba way ka gudbaan, dadna waxay u baahdaan caawimaad badan iyo waqti.
Dhibaatadu waxay xitaa soo celin kartaa xusuus hore ee xaaladdii nolosha adkeyd. Taasoo keeni karta inay sii adkaato xaalad nololeed. Dhanka kale dhibaatadu waxay suutogalin kartaa dib u qiimeyn arrinta iyo niyad-adeyg.
Dhibaatadu waa noocyo badan
Xaaladaha iyo marxaladaha nololeed ee kale duwan ayaa sabab u noqon karta dhibaatada. Waxa dhici karta arrin lama filaan ah ama dhacdo naxdin leh. Dhibaatada waxaa kaloo sababi kara arrimo culus oo iskumid ah oo soo noqnoqda. Dhacdooyinka dabiiciga iyo kuwa la saadaalin karo xitaa waxay sababi karaan dhibaato. Noocyada kala duwan ee dhibaatada waxaa loo kala qeexaa dhibaatada xaaladda nolosha iyo kuwa masiibo maskaxeed leh:
Koritaanka iyo marxaladaha adag ee nolosha ay marto
Dhibaatada marxaladaha kala duwan iyo dhibaatooyinka xaaladdaa nolosha waa kuwo la xiriirta waayaha nolosha kana muuqda heerarka kala duwan ee nolosha qofka. Xitaa dhacdooyinka wanaagsan, sida ilma la sugayey oo dhasha ayaa sababi karta dhibaato.
Dhibaatada masiibada ahi waxay keentaa inta badan xaalad aad u daran oo aan caadi ahayn oo horseedi karta argagax, taasoo qofka caadiga ah xamili karin.
Telefoonka guud ee arimaha dhibaatooyinka wadanka waxaa laga heli karaa kaalmo wada hadal oo loo fidinayo dadka dhibaateysan iyo qoysaskooda.
Telefoonka 01019 5202
Xiligga telefoonka la wici karo